စကျတငျဘာ 20, 2018 – Healthy Life Journal
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ခံရပြီးချိန်မှာ . . .
မေး. ငလျင်လှုပ်တာလို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခု ကြုံပြီးချိန်မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေ ဘယ်လောက်အထိ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဒေါ်ထွေး၊ ကျောက်မြောင်း။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ငလျင်လှုပ်တာ တစ်ကြိမ်ကြုံပြီးတဲ့အခါမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ အရမ်းများလာတတ်ပါတယ်။...
အရေပြားယားယံတဲ့ ဝေဒနာက ရောဂါနဲ့ဆက်စပ်သလား။
မေး. အရေပြားယားယံတာက ရောဂါရှိလို့ပါလား သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဦးမြမောင်၊ တွံတေး။ ပါမောက္ခဒေါ်မြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ယားတာက အရေပြားနဲ့ဆိုင်သလို တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ ရောဂါတွေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကြောင့် လည်းယားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရေပြားယားတယ်ဆိုတဲ့ လူနာတွေလာရင် မေးမြန်းတဲ့ မေးခွန်းတွေကအရေကြီးပါတယ်။...
အစာမကြေတဲ့ဝေဒနာနဲ့ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေက ကျန်းမာနေတဲ့လူတွေမှာ တောင်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ လေထတာ၊ လေပွတာ၊ ၀မ်းချုပ်တာ၊ ၀မ်းလျှောတာ၊ လေချဉ်တက်တာ၊ အစာမကြေတာ၊ အစာစုပ်ယူမှုအားနည်းတာ စတဲ့အစာအိမ်ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာရင် ဝေဒနာသက်သာစေဖို့ လုပ်သင့်တဲ့ အိမ်သုံးနည်းတွေရှိပါတယ်။ (၁) ရှလကာရည်နှင့် ပန်းသီးဖျော်ရည် နံနက်စာစားပြီးချိန်နဲ့ နေ့လယ်စာ မစားခင်အချိန်တွေမှာ ရှလကာရည်နဲ့...
အသီးအရွက်များများစားသည့် အမျိုးသားတို့၏ ကိုယ်နံ့ကို မိန်းကလေးများ ပိုနှစ်ခြိုက်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မက်ဂွာရီတက္ကသိုလ် စိတ်ပညာဌာနမှ ပြုလုပ်တဲ့ လေ့လာမှုအရ အသီးအရွက် များများစားတဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့ကို မိန်းကလေးတွေ ပိုမိုနှစ်ခြိုက်တတ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သုတေသီတွေက ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတဲ့ အမျိုးသားတွေနဲ့ လက်တွေ့စမ်းသပ်ခဲ့ရာ ပါဝင်သူတွေရဲ့ အရေပြားမှာ cartenoids...
ညဘက်အိပ်ရေးပျက်နေပြီလား . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ညဘက်အိပ်ရေးပျက်တာက ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်တက်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်နေပြီလား။ ဒီလိုဆိုရင် တစ်ညမှာ ၇-၉ နာရီလောက် အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်အနားယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန်တက်တာအပြင် အောက်ပါအကြောင်းရင်းတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ – စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း ညဘက်ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်တာကြောင့်...
ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးချိန်တွင် သတိပြုရမည့် အချက်များ
ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အူအတက်ရောင်တာ၊ အူပုပ်တာစတဲ့ အစာခြေလမ်းကြောင်းရောဂါတွေအတွက် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးချိန်မှာ ဘယ်လိုအချက်တွေကို အဓိကလုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ဗိုက်ခွဲပြီး ကုသမှုခံယူထားရင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဗိုက်ခွဲပြီးစမှာ အစာမစားရပါဘူး။ ရေလည်း မသောက်ရပါဘူး။ ခွဲပြီးတစ်ရက်ကြာလို့ လေလည်မှသာ အရည်စတင်သောက်ရပါတယ်။...
ကလေးအသက် ရှစ်လနဲ့ ကိုးလမှာ ဘာတွေကျွေးသင့်သလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကလေးအသက်ရှစ်လပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ ကလေးကို ဒိန်ချဉ်စတိုက်လို့ရပါပြီ။ ပြီးရင် နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို စကျွေးနိုင်ပါပြီ။ ဘယ်လိုကျွေးမလဲဆိုတော့ ညနေသုံးနာရီရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကလေးကို ဒိန်ချဉ်လေးတစ်ဇွန်းကို ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းကျွေးရင်ရပါပြီ။ ဒိန်ချဉ်ကိုတစ်ပတ်မှာသုံးရက် (ဥပမာ- တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာစသဖြင့်) စတင်ကျွေးလို့ရပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ချိစ်ဒိန်ခဲလေးတွေကိုလည်း...
ကျောင်းအိမ်သာညစ်ပတ်လို့ တစ်နေ့လုံး ဆီးမသွားခဲ့ဘူး မေမေ . . .
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) “ဆီးအောင့်တယ် မေမေ” ကျောင်းက ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း အမောတကောပြေးလာပြီး အိမ်သာထဲအတင်းဝင်ကာ ပြန်ထွက်လာသည့် သမီးလေး နှင်းဖွေးက မျက်နှာရှုံ့မဲ့လျက်ပြောသည်။ “ကျောင်းမှာ ဆီးမသွားခဲ့ဘူးလားသမီး” “မသွားချင်ဘူး မေမေ၊ ကျောင်းက အိမ်သာကညစ်ပတ်ပြီး နံစော်နေလို့ မသွားချင်ဘူး” တကယ်တော့ သမီးလေးနှင်းဖွေးက...